Indlela yokuLanda uMyeni / uMfazi wakho ongathembekanga kunye ne-GPS | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Ngaba iqabane lakho liyakopela kuwe? Ngaba uziva ufuna ubungqina? Ngaba kuya kufuneka ubeke umkhweli we-tracker ukuze ucime amathandabuzo akho? Ewe, akulunganga kwaphela ukuba uziva unganqabisekanga malunga neqabane lakho, banokukunika isizathu esinye okanye ezingaphezulu ukwenza ukuba uzive ngathi banokukopa okanye babone omnye umntu. Ukuba ukrokrela iqabane lakho ngokunganyaniseki kwaye kufuneka uqinisekise ukuthandabuza, ukusebenzisa umkhondo we-GPS kufuneka ibe yeyona ndlela yokugqibela. Kukho iqela lemicimbi yezokuziphatha efanelekileyo ukuba uyiphawule ecaleni kunye nengozi yokubanjwa kunye neengxaki ezinokuthi ziphakame.
Ukuba ngaphaya kwayo yonke imiba yokuziphatha kunye neengxaki zomthetho ezinokuthi ziphakame, wanelisekile kukuya phambili. Ukukhetha eyona sixhobo seGPS kuwe; Ungathenga isixhobo se-geolocation, ilogo ye-GPS, umkhondo wefowuni yeselfowuni okanye intonga yomkhondo. Izixhobo zokulandela umkhondo ngoku ziza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu ezinokubakho ngokufumana ezo zinto zinobungakanani bepokotho, kwiincinci ezincinci ngokwaneleyo ukuba zixhonywe kwiselfowuni okanye kwiwristwatch. Uninzi lweeGPS zihlala zibeka inqwelo mafutha ukulandela ukuba yeyiphi kwaye yeyiphi indawo ukusuka amaxesha ngamaxesha. Uninzi lwenkqubo yokulandela umkhondo we-GPS ivumela ukulandela umkhondo wexesha lokwenene ngokufuthi ukusuka kwiindawo ezikude, zihlala zihlaziywa qho kwimizuzwana eyi-2 ukuya kwimizuzwana eyi-5 kwiselfowuni / ikhompyuter esetyenziselwa ukulandelela iilogo. Ukongeza kwixesha lokujonga ixesha lokwenyani, kukho izingodo ezigciniweyo ukubonisa imbali yokuhamba kunye nezona ndawo zityelelweyo. Izixhobo zokulandela umkhondo we-GPS zihlala zingabizi kakhulu kwaye zingabizi kakhulu kwaye kulula kakhulu ukuzifaka nokusebenzisa. Ulondolozo nako kulula kakhulu.
Uninzi lwabantu lusakholelwa ukuba luyafuneka ukusebenzisa abaphandi babucala ukulandelela iqabane lokukopela, le yi21st Ikhulu kunye netekhnoloji iyintabalala. Akudingeki ukuba uqeshe umphenyi oxabisa amawaka eedola ukwenza nje umsebenzi onje, fumana nje umkhondo wokuba usebenzisa iiselayithi ezomkhosi ukufumana indawo. Ngale ndlela ugcina iindleko kwaye ulawula ngokupheleleyo uphando lwakho.
Iindidi zeGPS zezi:
Indawo yokungena yeGPS
Inkqubo yokuma komhlaba (i-GPS) logger
I-logger ye-GPS luhlobo lwembali ye-GPS, ikakhulu ilayisha ulwazi kwiithagethi kunye neevenkile kwindawo ethile yokugcina. Ukusuka apha kunokujongwa kunye nolwazi olunje ngamarekhodi endawo, ixesha olindwendwileyo, ukuhamba ngesantya esiphezulu kunye ekugqibeleni nexesha elichithwe kule ndawo. Ukuba uluhlobo ongathanda ukwazi apho iqabane lakho lichitha khona ixesha elininzi, le fowuni ngokuqinisekileyo iza kuba yeyakho. Esi sisixhobo esiluncedo kakhulu ukungqinisisa ukuba iqabane lakho lithembekile malunga nokuba liphi xa libuzwa. Xa iqabane lakho ukrokrela ukuba lingathembekanga likwindawo ethile efana nemoto, i-eatery, idinala okanye mhlawumbi endlwini yomnye umntu. Ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukuxela ngenxa yokuba indawo yabo ebekwe kwindawo ethile ngumatshini wokulinganisa iya kuboniswa kwisixhobo sakho sokugcina. Esi sixhobo sihlala sincinci kakhulu ngobukhulu kwaye siwenza kakuhle umsebenzi waso.
Unokubeka ngokulula i-tracker ngaphakathi okanye kwinqwelo yeqabane lakho, oku kunokuxhomekeka kudidi lomkhweli. Xa ukulungele ukukhuphela ulwazi lwakho lwalogi, unokulususa nje kwisithuthi luxhume kwikhompyuter yakho kwi-USB port kwaye ulukhuphele ulwazi. Nje ukuba kwenziwe oku ungajonga iilog nokuba kwisatellite okanye imephu kuyo nayiphi na into enobuhlobo ngakumbi nayo, isenokuba kwimeko yokubhaliweyo. Nje ukuba olu lwazi lufunyenwe, unokulutshisa kwi-flash drive okanye kwi-disc kwaye unokuhambisa ulwazi lwayo kade.
IGPS yexesha lokwenyani lelona cala linomdla kuzo zonke, ngale teknoloji. Unokulandela umkhondo xa usiya, ihlala ibiza kakhulu kwaye ifuna ukugcinwa okuninzi kunye nobuchule kodwa ufumana umsebenzi ngcono. Isebenzisa isoftware esekwe kwiwebhu eqhagamshelwe kwitekhnoloji ye-GPS, koku kuya kuhlaziywa kusekwe kuyo yonke intshukumo yokufikelela ngokufikelela kwi-intanethi kwiselfowuni okanye kwikhompyuter. Ixesha-lokwenyani likuvumela ukuba ubone ithagethi naphi na apho bakhoyo ngalo mzuzu. Umzekelo, xa umkhombandlela uvuliwe kwaye ujonge okwangoku, ungatsalela umnxeba iqabane lakho ukuqinisekisa indawo abakuyo. Oku kunokusetyenziselwa ukucima amathandabuzo akho, banokuxoka; Oku kuya kuqinisekisa ukukrokrela kwakho okanye banokunyaniseka kwaye baqinisekise indawo yabo, oku kunciphisa ukurhanela kwaye kwandise ukuthembela. Kuba isenokuba sisiqinisekiso sokuba ukhathazeka ngaphandle kwesizathu, iqabane lakho alichithi xesha kunye nenye indoda njengoko ubucinga.
Ungangena xa iqabane lakho likuxelela ukuba bazakusebenza pha ngokuhlwanje, oku kuyakwenza ukuba wazi ukuba bangaphi mhlawumbi bekuya kuba sekusemsebenzini njengoko bekutshiwo okanye kwenye indawo. Oku kunokuba luncedo ngokwenyani xa ungathanda ukubabamba bephinde babamba ngesandla okanye kwisenzo.
Kwi-GPS yexesha lokwenyani ekhoyo kule mihla, kuya kufuneka uyazi into yokuba bahlala beza nomrhumo wenyanga. Abanye bakhupha imali yokuhlawula nayo, le ntlawulo iyonke isukela kwi- $ 20 ukuya kwi- $ 70 ngenyanga. Ezinye iiyunithi zinokukuthumela isikhombisi sendawo ngomyalezo wombhalo kodwa kumaxesha anamhlanje, oku akuyomfuneko kuba uninzi lweefowuni zinokufikelela kwimephu ngokuthe ngqo kwaye zikunike ulwazi olufunekayo.
Iindawo ezinobuchule ukubeka umkhondo we-GPS kwimoto
Kubalulekile ukubeka iyunithi ye-GPS kwindawo enokuthi ikwazi ukunxibelelana nesatellite, ukubekwa ngokufanelekileyo kubaluleke kakhulu kwaye kubaluleke kakhulu. Apha ngezantsi luluhlu lweendawo ezinokukhangelwa kubekwa kwimoto:
Ngaphakathi bumper yeplastiki
Ngaphantsi kwesihlangu sebug
Umda phakathi kwefestile kunye ne-hood
Ngaphantsi kwedash / ukukhanya kwesithathu kweebhuleki
Ngaphakathi bumper yeplastiki engasemva
Ngaphakathi kwebhokisi yegloves
Ngaphantsi kwesihlalo esingasemva okanye ngaphambili
5991 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-26 Namhlanje